Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Manufacturing အလုပ်အကိုင်များ
ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး Jobs in Myanmar
ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး အလုပ် 37 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
ရန်ကုန်၊မန္တလေးရှိမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများကို Alote Myanmar တွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သိုလှောင်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ (164)
ယာဉ်မောင်း | Car Driver
မော်တော်ယာဉ်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးတို့ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ရန်၊ မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါက အထက်လူကြီးထံသို့အကြောင်းကြားတင်ပြရန်၊ သတ်မှတ်ထားသော လမ်းကြောင်းများကို အန္တရယ်ကင်းစွာ မောင်းနှင်ပို့ဆောင်ရန်၊
အကျိုးအမြတ်: ဘောနပ်စ် အချိန်ပိုကြေး
အလုပ်အမျိုးအစား: ယာဉ်မောင်း၊ ပစ္စည်းပို့၊ အငှားဆိုင်ကယ်မောင်း
Senior Accountant (Costing) (Manager Level)
အငယ်တန်းစာရင်းကိုင်၊ စာရင်းကိုင် | Simple Accounting, Bookeeping
To ensure the reporting such as financial report. To prepare the monthly cost forecasts and ensure. Run the monthly cost forecasts and ensure all targets are met within the stipulated time Apportion costs between manifold units of production and management. Ensure the arrangement of cost of production to material costs, wages, and overhead costs. Prepare estimates of costs for unique products in order to establish prices of products and to forecast production. Protects organization's value by keeping information confidential.
အကျိုးအမြတ်: Annual Bonus, Leave Bonus, Uniform, Ferry provide.
ဂိုဒေါင်လုပ်သား | Warehouse staff
မြောက်ဥက္ကလာ | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
- ရေသန့်စက်ရုံတွင်လုပ်ကိုင်ရမည်။ - ရေသန့်ဗူးများ၊ရေသန့်ကဒ်များကိုအတင်၊အချ၊သယ်ဆောင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: ဖယ်ရီ ယူနီဖောင်း
တင်သောနေ့: 03 Dec 2021
အလုပ်အမျိုးအစား: ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သိုလှောင်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ
မော်တော်ယာဉ်မှူး - Vehicle Control Officer
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ််ထိန်းလုပ်သား | Fleet Worker
-လုပ်ငန်းသုံးကားများအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်ရပါမည်။ -လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ပြီး၊ ယာဥ်မောင်းများအား ထိန်းသိမ်းအုပ်ချုပ်နှိုင်မှု စွမ်းရည်ရှိရပါမည်။ -မော်တော်ယာဥ်နှင့်ပတ်သက်သော အမှုအခင်းများဖြစ်ပေါ်လာပါက ၊ဖြေရှင်းပေးနိုင်သောသူဖြစ်ရပါမည်။ -အလုပ်သဘာဝအရ လိုအပ်ပါက အချိန်ပို တခါတရံ ဆင်းနိုင်ရပါမည်။ -မြောက်ဒဂုံ၊တောင်ဒဂုံ၊တောင်ဥက္ကလာ၊အင်းစိန် မြို့နယ်များအတွက်ဖယ်ရီရှိသည်။
အကျိုးအမြတ်: - ပမာဏကန့်သတ်ချက်ဖြင့်Meal provideပေးခြင်း - Ferry ထောက်ပံ့ခြင်း။ - နှစ်အလိုက်ဆုကြေးငွေ။ - နှစ်အလိုက်လစာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျိုး
တင်သောနေ့: 30 Nov 2021
Recruiter active 18 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
ဆိုင်အရောင်းစာရေး | Business Sales Representative
Royal Mfg Co.,Ltd.
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
* ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်ဖြစ်သော အချိုရည်များရောင်းချပေးရမည်။ *ချမှတ်ထားသော Target ပြည့်မှီအောင်ရောင်းချပေးခြင်း။ *ကုန်ပစ္စည်းများအားဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချီပေးခြင်း။ *Customers အသစ်များရှာဖွေခြင်း။ *အသင်းအဖွဲ့းဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: *Commission ပေးသည်။ *Tagged ကြေးပေးသည်။
တင်သောနေ့: 25 Nov 2021
ကြီးကြပ်ရေးမှူး (EC Engineer)
ကြီးကြပ်ရေးမှူး | Line Supervisor
မင်္ဂလာဒုံ | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
စက်များနေ့စဉ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် စက်အတွက်လိုအပ်သော အပိုပစ္စည်းများ စုဆောင်းထားခြင်း မီးအား ပြတ်တောက်ပါက စက်ကို ချက်ခြင်းလည်ပတ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည် စက်ချို့ယွင်းချက်များရှိပါက မည်သို့ လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကို စီစစ် ပြုပြင်ရမည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားရမည် လိုအပ်သလို သင်တန်းပို့ချပေးရမည် English version Daily maintenance of machines in department. Spare parts must be backed up. In the event ofapower outage, it must be reopreate as soon as possible. Evaluating problematic systems and determining what installation or repair services need to be performed. Developing and implementing maintenance procedures. Making Schedules, assigning work and training employees.
အကျိုးအမြတ်: Annual Bonus, Leave Bonus, Meal provide.
အလုပ်အမျိုးအစား: စက်ရုံနှင့် အထည်ချုပ်
Retail Sales Executive (YGN/MDY)
အောင်မြေသာဇံ | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
• တာဝန်ကျဧရိယာ၏ လက်လီအသားတင်ရောင်းချမှု (Retail Net Sales) နှင့် အရောင်းတိုးတက်မှုနှုန်း (Sales Growth Rate) အတြက္တာဝန်ယူရမည်။ • Retailer Universe ၏ ခိုင်မာသောလွှမ်းခြုံမှုရရှိရန် လက်လီရောင်းချသူများ အရေအတွက်ကို တာဝန်ယူရမည်။ • Active Customer Ratio ႏွင့္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္ • “Shop Share Target'' မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍လည္း တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္ • “Go-To-Market” tools ကို အသုံးျပဳ၍၊ “Trade Promotion” “Consumer Promotion ” “Store Branding” “Sell-Out” စသည့္ activation မ်ားကိုလည္းလုပ္ေဆာင္ရပါမည္ • Sales Process မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရမည့္ အျပင္ collection လုပ္ျပီးသည္အထိ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရပါမည္
အကျိုးအမြတ်: * အစားအသောက် သို့မဟုတ် ခရီးသွားစရိတ် * အချိန်ပိုကြေးများ * စွမ်းဆောင်ရည်ကျော်မှုအတွက်ဆုများရမည်။"
စက်မှူကျွမ်းကျင်ပညာရှင် | Technician (Mechanical)
Geo Asia Industry & Mining Co.,Ltd.
ကလော | ရှမ်းပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်
လုပ်သက်အတွေ့အကြုံ ရှိသူ ဦးစားပေးပါမည်။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ နယ်ဝေးခရီး (ကလောနှင့်အောင်ပန်းဒေသ)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ နေစား စားရိတ်ငြိမ်းဖြင့် ကုမ္ပဏီမှထောက် ပံ့ပေးပါသည်။
စာရေး | Admin Clerk
အရောင်းအမှာစာရရှိရေးနှင့် ဖောက်သည်တုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အရောင်းအဖွဲ့အား ပံ့ပိုးကူညီရမည်။ အဆိုပြုချက်များ၊ သဘောတူညီချက်များ၊ အရောင်းနှင့် အေးဂျင့်အစီရင်ခံစာများနှင့် တင်ပြချက်များကို ပြင်ဆင်ရမည်။ အရောင်းအဖွဲ့များမှ လစဉ်၊ အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် နေ့စဉ် အရောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကို စုဆောင်းရမည်။ ဒေတာဘေ့စ် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာတွင် အရောင်းအမှာစာ၏ အခြေအနေကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရမည်။ ဌာနတွင်း အရောင်းအစည်းအဝေးများ၏ တောင်းဆိုချက်အားလုံးကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ဌာနမှပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း အရောင်းလှုပ်ရှားမှု/ကိရိယာများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အရောင်းအဖွဲ့ကို ကူညီပေးရမည်။ အခြားတာဝန်များကို လိုအပ်သလို ပေးအပ်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: * Bonus + Commission * အစားအသောက် သို့မဟုတ် ခရီးသွားစရိတ် * အချိန်ပိုကြေးများ * စွမ်းဆောင်ရည်ကျော်မှုအတွက်ဆုများရမည်။"
Qualifity Control (Heavy Workwear Product)
အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာစီမံရေးအရာရှိ | Quality Control
ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
Job Description New production start-up per style (PP meeting, reviewing PP sample, questioning and comments) Customer sample, TP reviewing and technical support (Heavy Workwear) Check and report the input/output by daily. Follow up production plan and check order status and conduct for inspection (Inline & AQL Final) Follow the instruction from HK for quality/production checking. Assistant CSR (Factory Audit) any requires
အကျိုးအမြတ်: - Other Allowance - Bonus
Sales & Customer Service (ကျောက်ပန်းတောင်း Plaza)
Zabu Aye မြေပဲဆီ
ကျောက်ပန်းတောင်း | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
Customer များထံသို့ (cold calling) ဖုန်းပုံမှန်ခေါ်ဆိုရမည် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး နှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည် ပေးအပ်ထားသော တာဝန်များအား ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမည် လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး ဖောက်သည်များနှင့် လျင်မြန်စွာရင်းနှီးမှု တည်ဆောက်နို်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: စွမ်းဆောင်ရည် အတွက်ဆုလာဘ်များ ရန်ကုန် ကမာရွတ်ရူံးတွင်သာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်
အထွေထွေအကူ | General Helper
ကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ နယ်ဝေးခရီး (ကလောနှင့်အောင်ပန်းဒေသ)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Sales Representative ( Magway)
မကွေး | မကွေးတိုင်း မကွေးတိုင်း
- Sales Targetများ ပြည့်မီ (သို့) ကျော်လွန်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း။။ - Prospective clients များနှင့် စာချုပ်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။ - pricing schedules for quotes၊ promotionsများနှင့် negotiationsများအတွက် pricing schedulesများကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးခြင်း။ - အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်အစီရင်ခံစာများပြင်ဆင်ခြင်း။ prospective clientsများထံ အရောင်းတင်ပြချက်များ ပေးခြင်း။ - အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ - ကုမ္ပဏီပရိုဂရမ်များကို နားလည်ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ခြင်း။ - Customers များထံမှအပ်ငွေများနှင့် ငွေပေးချေမှုလက်ကျန်များကို ရယူခြင်း။ - အော်ဒါများအတွက် အရောင်းစာချုပ်များ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တင်သွင်းခြင်း။ - Visiting clients များနှင့် potential clientsများအတွက် လိုအပ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို မြှင့်တင်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: ဘောနပ်စ် ထောက်ပံ့ကြေး
ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ နယ်ဝေးခရီး (ကလောနှင့်အောင်ပန်းဒေသ)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ | Engineer (Mechanical)
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ နယ်ဝေးခရီး (ကလောနှင့်အောင်ပန်းဒေသ)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: Attractive salary package
Project Sales Executive (YGN/MDY)
• Leading Main Contractor များ ၊ Project Dealer များ (အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ Project များတွင် မိမိတို့၏ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူသုံးစွဲရန် ဆန္ဒရှိသူများ) နှင့် Relationship ခိုင်မာစေရန် strategy များကိုရေးဆွဲရမည် • Main Contractor များနှင့် Project Dealers များအတွက် မိမိတို့၏ Product နှင့်ပက်သက်သည့် Innovation, Service စသည်တို့ကို တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရမည် • Project Dealer များအပါအဝင် Main Contractors များအား မိမိတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချ၍ Sales Target ပြည့်မှီအောင်လုပ်ဆောင်ရမည်
Aung Thapyay Khaing Co.,Ltd.
- Strong leadership, interpersonal and multitasking skills - Must have good organization, communication and team development - Communicate and advise all department on potential rule, regulation and disciplinary action
စက်ရုံမန်နေဂျာ | Factory Manager
ဒဂုံ | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
Job Description Factory တခုလုံးကိုကောင်းစွာအုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းများအချိန်မီရရှိရန်နှင့် ကုန်ကြမ်းပြတ်တောက် မှု မဖြစ်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။ ကုန်ကြမ်းများ အလေအလွင့်အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် လက်အောက်တာဝန်ခံများအား ကြီးကြပ်ညွှန်ကြား ရန်။ Production Plan အရ လိုအပ်မည့်လုပ်သားအရေအတွက်နှင့် Time Schedule များရေးဆွဲရန်။ လုပ်ငန်းကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန် လုပ်သားများနေရာချထားခြင်း၊ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ခွဲဝေခြင်း ကိစ္စများစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ခံများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ (SOP)ရေးဆွဲရန်။ သတ်မှတ် Plan အတိုင်း ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းများနေရာချထားမှု (Layout Plan) များရေးဆွဲရန်။ စက်မောင်းနှင်သူများ အန္တရာယ်ကင်းစေရေးအတွက် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ (SOP) ရေးဆွဲရန်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပက်သက်၍ကုန်ပစ္စည်းများ သတ်မှတ်အရည်အသွေးပြည့်မှီစေရေး ၊ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေရေး။ သတ်မှတ်အရေအတွက်အတိုင်း ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးတို့အတွက် ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး ဆောင်ရွက် ရမည့်နည်းလမ်း အဆင့်ဆင့် (Standard operating procedure) များသတ်မှတ်ရေးဆွဲရန်။ အထက်အရာရှိ ပုံမှန်အစီရင်ခံခြင်း၊ လိုအပ်သလို ကြားဖြတ်အစီရင်ခံခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်။ တင်ပြအစီရင်ခံရာတွင် နေ့စဉ်နှင့် လစဉ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ( Daily & Monthly Production Report) ၊ ကုန်ကြမ်းသုံးစွဲမှုအခြေအနေ (Usage of Raw Materials Report)၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်များ (Work Plan) ၊ အရည်အသွေး ပြည့်မီမှု (Quality Control ) အချက်အလက်စာရင်း ဇယားများ ပြုစုတင်ပြရန်။ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ရုံးချုပ်မှပေးပိုသည့် လုပ်ငန်းသုံးငွေများကိလည်း လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ ထုတ်ပေးရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်။ မိမိလုပ်ငန်းငန်းနှင် ဆက်သွယ်နေ့သည့် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ မြို့နယ်အဆင့်၊ခရိုင်အဆင့်၊ ပြည်နယ်အဆင့်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်လည်း လိုအပ်သလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်။
အကျိုးအမြတ်: Rewards for over performances
Recruiter active4days ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
• အလားအလာရွိေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ၎တို႕၏ Project မ်ားတြင္ မိမိတို႕၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို ၀ယ္ယူသုံးစြဲရန္ ဆႏၵရွိသူမ်ား) ႏွင့္ Relationship ခိုင္မာေစရန္ strategy မ်ားကိုေရးဆြဲရမည္ • Industrial Customer မ်ားအတြက္ မိမိတို႕၏ Product ႏွင့္ပက္သက္သည့္ Innovation, Service စသည္တို႕ကို တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ • Project Dealer မ်ားအပါအ၀င္ Main Contractors မ်ားအား မိမိတို႕၏ထုတ္ကုန္မ်ားကိုေရာင္းခ်၍ Sales Target ျပည့္မွီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည္
အရောင်းမြှင့်တင်သူ | Promoter
Unicharm Myanmar Co.,Ltd.
ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး၏ Sales revenue နှင့် အမြတ် ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး၏ Market share ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ရန် Sales Data များကို စုဆောင်းပြီး analyse လုပ်ခြင်း sales team members များကို လမ်းပြပံ့ပိုးပေးသည်။ customer များ၏ လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာသတ်မှတ်ခြင်း။ စျေးကွက်လမ်းကြောင်းများကို စောင့်ကြည့်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ တုံ့ပြန်ချက်ကို ရယူပါ။ Skill & Competency Key internal & external partners များနှင်ံ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း Presentation & communication skills ကောင်းမွန်ခြင်း အလုပ်ဖိအား ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း နှင့် ရည်ရှည် အလုပ်လက်တွဲ လုပ်နိုင်ရမည် English & computer skills must have intermediate Goal driven environment နှင့် timeline အတွင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း စျေးကွက်လမ်းကြောင်းများကို စောင့်ကြည့်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို brand manager နှင့် သက်ဆိုင်ရာ သို့ သတင်းပေးခြင်း Think analytically from different perspectives to forecast the consequences and have branding plans accordingly Acquire and utilize knowledge and skills according to the situational requirements Coordinate and work with external agencies inaprofessional manner
Senior Warehouse Staff
- Bin Card၊ Ledger နှင့် Computer System တွင် data ထည့်သွင်းခြင်း။ - Production နှင့် Distributors များအတွက် issue products များနှင့် orderများ ပြင်ဆင်ပေးခြင်း၊ - ကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရယူပြီး စာရင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် စံချိန်စံညွှန်းအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ - အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းသို့ ဆက်သွယ်ပေးခြင်း၊ - ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအရာရှိအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ - ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပါဝင်ပေးခြင်း၊ - သိုလှောင်ရုံယာဉ်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဖြင့် ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊
• Leading Property Developer မ်ားႏွင့္ Relationship ခိုင္မာေစရန္ strategy မ်ားကိုေရးဆြဲရမည္ • Property Developer မ်ားအတြက္ မိမိတို႕၏ Product ႏွင့္ပက္သက္သည့္ Innovation, Service စသည္တို႕ကို တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ • BuildaProject Pipe-line which will be monitored throughaProject Pipe-Line Tracking too
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအကူ | Operations Staff
Managementမှ ကြေညာထားသည့်အတိုင်း Customer ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ရမည်။ OTIF 95% ပေးပို့ရမည်။ Customer Orders များကို စီမံဆောင်ရွက်ပြီး Customer Orders များကို ပို့ဆောင်ပြီးသည်အထိ စီမံရမည်။ အထက်ဖော်ပြပါ တာဝန်များကို မန်နေဂျာအဖွဲ့၊ထံreport ပေးရပါမည်။ စာချုပ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အရောင်းအမှာစာများ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မှာယူမှု/ငွေပေးချေမှုစနစ်သို့ ငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲများကို စီမံခန့်ခွဲရမည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် ငွေတောင်းခံခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း သဘောတူထားသည့်အတိုင်း ပြေစာလုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ဆောင်ရမည်။ ငွေတောင်းခံခြင်းဆိုင်ရာ တိကျမှုနှင့် ဝယ်ယူသူသဘောတူညီချက်များကို သုတေသနပြုရန်အတွက် စာချုပ်ဒေတာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ သဘောတူညီချက်အမျိုးမျိုးရှိ အဓိကနှုန်းထားများ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် အခြေအနေများကို အလေးပေးဖော်ပြသော အပိုဆောင်းများ။ လစဉ်၊ သုံးလတစ်ကြိမ် ငွေတောင်းခံခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် စာရင်းဇယားများကို ပြုစုပြီး ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရမည်။ ပြဿနာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြေရှင်းရန် အတွင်းပိုင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်၊ ဆက်သွယ်ပြီး ပူးပေါင်းရမည်။
အကျိုးအမြတ်: . Yearly Performance Bonus . အလုပ်နှစ်ပတ်လည် . နှစ်စဉ် Team Building Trip . ယူနီဖောင်း Ferry ပေးပါသည်။"
စားဖိုမှူး | Chef, Cook
• ပညာအရည်အချင်း(၁၀)တန်းဖြစ်ရမည်။ • အသားငါးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုကောင်းမွန်စွာစီမံနိုင်ရမည်။ • အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ရမည်။ • အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
Areas of accountability Outlet sale data များ update ပြုလုပ် ခြင်း Brand အလိုက် Sales analysis ပြုလုပ် ခြင်း Outlet promotion plan ဆွဲခြင်း SP Fee Cost ဆွဲခြင်း To increase the company shelf share Product အသစ် တီထွင် ထုတ်လုပ်ခြင်း Merchandiser training လုပ်ခြင်း Market Visit လုပ်ရမည် Negotiation with DB and Buyers Experience in principal line
တင်သောနေ့: 12 Nov 2021
*အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ * အသက်(၁၈ မှ၄၀)ကြားရှိသူ *အရှေ့ဒဂုံနှင့်နီးစပ်သူဦးစားပေးမည်။ *အရောင်းကားမောင်းရမည်။ *နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ *အရက်သေစာကင်းရှင်းသူ။ *ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကျွမ်းကျင်စွာသွားမောင်းနှင်နိုင်သူ။
အကျိုးအမြတ်: *ကော်မရှင်ရမည်။ *နယ်ခရီးသွားပါကနယ်ကြေးပေးသည်။
တင်သောနေ့: 11 Nov 2021
Grand Wynn Group company
Grand Food Mart၏ mini mart အား ကြီးကြပ်ထိန်းသ်ိမ်းရမည်။
တင်သောနေ့: 05 Nov 2021
The recruiter at this company was last active reviewing applications.
ငွေသိမ်း | Cash Collector
- ၎င်းတို့၏ ရက်လွန်ဘေလ်များကို ဖောက်သည်ထံ ဖုန်းဆက်၍ သတိပေးပြီး ငွေပေးချေမှုကို စီစဉ်ပါ။ - အချိန်မီစုဆောင်းမှုပြုလုပ်ရန် - နေ့စဉ်ငွေသားစီမံခန့်ခွဲမှု၊ လက်ရှိအကောင့်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဘဏ်ဆက်ဆံရေးများပါ၀င်ရန် ငွေသားစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ညွှန်ကြားခြင်း။ - ငွေသားပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကို ကာကွယ်၊ စစ်ဆေးပြီး ထိန်းချုပ်ပါ။
အကျိုးအမြတ်: * စွမ်းဆောင်ရည်ကျော်မှုအတွက်ဆုများ
- လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့ကို စီမံခန့်ခွဲပါ။ - အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထိရောက်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်စေရန် လမ်းညွှန်ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ - လစဉ်ငွေပေးချေမှု၊ ဝန်ထမ်းများအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့် လစာငွေထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ပါ။ - အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ပံ့ပိုးကူညီပါ။
အကျိုးအမြတ်: - စွမ်းဆောင်ရည်ထက် ကျော်လွန်မှုအတွက် ဆုချီးမြှင့်ခြင်း။
- အရောင်းပိုင်းကို တာဝန်ခံ၍ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ရမည်။ - ဖောက်သည်အမိန့်နှင့်မေးမြန်းချက်များကိုတုံ့ပြန်ပါ။ - ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များ၊ ပြဿနာများ၊ စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များအတွက် အလားအလာများဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူ ထောက်ပံ့ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု။ - အဖွဲ့၀င်များနှင့် အခြားဌာနများနှင့် အရောင်းကြိုးပမ်းမှု ညှိနှိုင်းပါ။ - အပြုသဘောဆောင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းပါ။
အကျိုးအမြတ်: - ဖယ်ရီပေးဆောင်သည်။ - စွမ်းဆောင်ရည်ကျော်မှုအတွက် ဆုလာဘ်များ